Mogadishu Journal » 2018 » December » 18
Ciidamo Itoobiyaan ah oo la wareegay amaanka Magaalada Baydhabo
Mjournal :-Wararaka naga soo gaaraya magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay ayaa ku waramaya in amaanka Magaaladaasi ay la wareegeen ciidamo Itoobiyaan ah oo qeyb ka ah Howlgalka Nabad ilaalinta ee AMISOM. Wararka ayaa intaas ku daraya in dhamaan wadooyinka muhiimka ah iyo...
Maraykanka oo in ku dhow Hal Bilyan oo dollar ugu deeqday dowlada Soomaaliya
Mjournal :-Danjiraha Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto oo maanta soo saaray war saxaafadeed ayaa sheegay in Soomaaliya ay siin doonaan adduun gaaraya lacageed oo gaareya $900 million oo lagu maalgelinayo Soomaaliya. Dawladda Mareykanka ayaa sheegtay in Soomaaliya ay ka...
Diyaaradda Kenya Airways oo maanta duulimaad ka bilaabeysa Muqdisho
Mjournal :-Diyaaradda Kenya Airways ayaa shaaca ka qaaday inay maanta duulimaad toos ah ka bilaabi doono garoonka diyaaradaha Muqdisho, kaddib markii labo jeer oo hore dib u dhac ku timid. Duulimaadkan ayaa noqon doona Muqdisho iyo Nairobi, waxaana qorshuhu yahay in maanta...
Man United oo shaqada Ka ceyrisay Jose Mourinho
Kooxda Man United ayaa Gabi ahaanba Shaqada ka Raacdeesay Macalinka Jose Mourinho. Kadib Guul daradii Liverpool ayay maamulka Man United Go’aan sadeen inay ceyriyaan Jose Mourinho. Kulankii saakay ee maamulka Kooxda Man United ay wada qaateen ayaa lagu Go’aan saday in la Buriyo...
Wasaaradda Amniga XFS oo shaqo joojin ku sameysay Shirkad uu maamulo Matt Bryden
Mjournal :-War qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska Wasaaradda Amniga ee Xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in gebi ahaanba shaqada laga joojiyay, isla markaana dalka laga mamnuucay inay kahowlgasho shirkadda Sahan Research, taasi oo ay ku socoto baaritaano xagga amniga....
Itoobiya oo Qunsul cusub u magacowday Somaliland
Mjournal :-Wasaaradda Arrimaha dibadda dalka Itoobiya ayaa xilka ka qaaday Qunsulkii dowladda Itoobiya u joogay Somaliland, waxaana ay soo Magacowday Qunsul cusub oo loogu tala galay in uu ka shaqeeyo xiriirka Somaliland iyo dowladda Itoobiya. Qunsulka cusub ee Itoobiya u joogi...
Madaxweynaha Jabuuti oo walaac ka muujiyay Isbedellada Geeska Afrika
Mjournal :-Ismaaciil Cumar Geelle Madaxweynaha Jabuuti ayaa walaac xooggan ka muujiyay is-bedellada ka socda Geeska Afrika, isagoo ku taliyay in la dhawro dalalka gobolka, islamarkaana Umadda gobolka ay leeyihiin Ururo ka shaqeeya Isdhexgalka. Madaxweyne Geelle waxaa uu sheegay ...
Mjournal :-Faah faahin ayaa ka soo baxaya kulan saacado qaatay oo xalay dhex maray Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Maxamed Mursal iyo Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre, iyadoo kulankan uu ka dhacay meel ka baxsan Madaxtooyada. Kulankan ayaa ahaa kii u horeeyay ee...
Mjournal :-Qaban qaabo iyo diyaar garow xooggan ayaa loogu jira doorashada Madaxweynaha Koofur Galbeed oo lagu wado in maalinta berri ay dhacdo, iyadoo ammaanka magaalada Baydhabo si aad ah loo adkeeyay. Guddiga Doorashada Madaxweynaha Koofur Galbeed ayaa maanta yeelanaya kulan...